Qaybo ka jediyay Saarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Qaybo ka mid ah Shiinaha Shaambadaha Warshad
Qaybaha Shaabbinta 4
Codsiga qaybaha shaabbadda 1. Qaybaha korontada warshad lagu shaabadeeyo. Warshadda noocan ah waa warshad cusub, oo ku horumarinaysa horumarinta qalabka korontada. Warshadani waxay inta badan ku urursan yihiin koonfurta. 2. Gawaarida iyo qaybaha kale ee warshadaha. Badanaa waxaa lagu sameeyaa feer iyo xiirasho. Qaar badan oo ka mid ah shirkadahaani waxay ka tirsan yihiin warshadaha qaybaha caadiga ah iyo qaar ka mid ah dhirta shaambadaha madaxbannaan. Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira warshado yaryar oo badan oo ku wareegsan qaar ka mid ah qalabka baabuurta ...
Qaybaha Shaabbinta 5
Qaybaha Shaabbinta 6
Qaybaha Shaabbinta Sawir qoto dheer 8
Qaybaha Shaabbinta 10
Qaybaha Shaabbinta 9
Qaybaha Shaabbinta 11